Thwebula Avast Internet Security 20.5.5410 – Vessoft
WindowsUkuphephaUkuvikelwa okupheleleAvast Internet Security
Ikhasi elisemthethweni: Avast Internet Security
I-Wikipedia: Avast Internet Security
I-Avast Internet Security – i-suite ephelele yokuvikela ikhompyutha nokusebenza kwe-intanethi komsebenzisi. Isofthiwe ilondoloza yonke idatha engenayo futhi ephumayo futhi ivikela ngokuphambana kwezilungiselelo ze-DNS ukuze kuvinjelwe ukuqondisa kabusha abasebenzisi kumawebhusayithi amanga. I-Avast Internet Security isekela uhlelo lokuhlola uhlelo oluhlakaniphile oluhlola isimo sekhomputha bese lubona yonke inkinga ngokuphepha, ubumfihlo nokusebenza. I-Avast Internet Security ikuvumela ukuba uhlole isofthiwe esolisayo namafayela esitolo se-sandbox ephephile ngaphandle kokulimala kwikhompyutha yakho. Isofthiwe ihlaziya i-Wi-Fi nawo wonke amadivayisi axhunyiwe ukuze abone ukukhubazeka noma abantu abangagunyaziwe. I-Avast Internet Security iqukethe namamojula wokuvikela ngokumelene ne-ransomware, inomphathi wephasiwedi eyakhelwe ngaphakathi futhi isekela amathuluzi wokuhlanza isiphequluli.
I-antivirus kanye ne-antispyware
Thwebula Avast Internet Security
I-Avast Free Antivirus – enye yama-antivirus athandwa kakhulu iqoqo lezici zokuphepha, ubuchwepheshe bokufunda ngomshini, kanye nedatha enkulu ukuthola izinsongo.
Amazwana ku Avast Internet Security
Avast Internet Security software ehlobene
I-Baidu Antivirus – isoftware yokulwa namagciwane ukuthola nokususa amafayela ayingozi. Isoftware isebenzisa izinjini ezahlukene ze-antivirus ukuvikela izindawo ezahlukahlukene zohlelo.
Lolu hlelo lokusebenza lwe-antivirus lusekela ubuchwepheshe befu ukuze kusetshenziswe ngokuphephile kwi-intanethi nokuvikelwa kokusongela okuyisisekelo kwe-cyber world.
Ithuluzi ukudala sikrini nokuqopha ezingxenyeni ezihlukene computer. Futhi isofthiwe iqukethe umhleli esakhelwe ukusebenza izithombe nemiphumela.
Isofthiwe for elawulwa kude computer ngokusebenzisa Android, iOS and Windows Phone amadivayisi. Isofthiwe ngokugcwele kulingisa imisebenti igundane kanye ikhibhodi.